ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် တတိယကြိမ်မြောက် သျှမ်းလူငယ်တွေ့ဆုံနှီး‌နှောဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနား ပြုလုပ်ကျင်းပ – Tai Freedom
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ခေမာသီရီရပ်ကွက် သျှမ်းမျိုးနွယ်များဓမ္မရုံတွင် တတိယကြိမ်မြောက် သျှမ်းလူငယ်တွေ့ဆုံနှီး‌နှောဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနားအား ၃ ရက်တိတိ အောင်မြင်ပြီးမြောက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ သျှမ်းလူငယ်တွေ့ဆုံနှီး‌နှောဖလှယ်ပွဲအခမ်းအနားအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက်နေ့ မှ မေလ ၂၅ ရက်နေ့ထိ ပြုလုပ်ကျင်းပရာတွင် သံဃားတော်များ ၊ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ၊ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီကိုယ်စားလှယ် စိုင်းကျော်ညွန့် ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နန်းခမ်းအေး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် စိုင်ဝမ်းလျန်းခမ်း ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း မြို့နယ်ပေါင်း ၁၁ မြို့နယ်မှ သျှမ်းလူငယ်များ စုစုပေါင်း ၂၃၂ ဦး တက်‌‌ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သျှမ်းလူငယ်တွေ့ဆုံနှီး‌နှောဖလှယ်ပွဲ၏ ပထမရက်နှင့် ဒုတိယရက်တွင် နိုင်ငံရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ ၊ လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ မူယစ်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ စသည့်အတွေ့အကြုံရှိသူများမှ လာရောက် ဆွေးနွေးဟောပြောပြီ ကချင်ပြည်နယ် သျှမ်းလူငယ်ကွန်ရက်ဗဟိုကော်မတီအား ဖွဲ့စည်းနိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သျှမ်းလူငယ်တွေ့ဆုံနှီး‌နှောဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနားအား တက်ရောက်လာကြသည့် သျှမ်းလူငယ်များမှ
၁. တိုင်းရင်းသားလူထုတစ်ရပ်လုံး လိုလားသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေသောကာလတွင်း နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရမှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဆန္ဒသဘောထားများကို အလေးအနက်ထား ထည့်တွင်းစဉ်းစားရန်နှင့် လက်ရှိစီမံကိန်းအကျိုးဆက်များကြောင့် ဒေသတွင်းပြည်သူများ၏ ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန်။
၂. ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် စစ်ရေးပဋိပက္ခများကို လျော့ချ၍ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှတဆင့် အဖြေရှာဖြေရှင်းရန် တိုက်တွန်းသည်။
၃. မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်သည် မိမိဒေသတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုများကို ဆိုးရွားစွာ ခြိမ်းခြောက်နေလျှက်ရှိသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်များကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းနိုင်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိပြီး မိမိတို့သျှမ်းလူငယ်များမှလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွလက်တွဲကာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
၄. ဆွေးနွေးပွဲမှ သဘောတူချမှတ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကချင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ သျှမ်းလူငယ်ကွန်ရက် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီမှ ဆက်လက်တာဝန်ယူ အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ – ဆိုသည့်အချက် ၄ ချက်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်စွဲဖြင့် သဘောတူ ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Previous ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် တစ်ဆို့မှုတွေကျော်လွှားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာနိုင်ခဲ့
Next RCSSပညာ‌ရေးကော်မတီမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာနှစ် ကျောင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ